मज्जाले हिँड्नुहोस्ः आयु बढ्छ, रोगको खतरा कम हुन्छ ! – SawalNepal
मज्जाले हिँड्नुहोस्ः आयु बढ्छ, रोगको खतरा कम हुन्छ !
२०७५ फाल्गुन २७, सोमबार १६:४१ मा प्रकासित
शरीरलाई स्वस्थ र फुर्तिलो बनाउनको लागि खानासँगै व्यायामको पनि निकै ठूलो भूमिका हुन्छ। बिहानै उठेर मर्निङ वाकमा निस्किनेहरुकाे संख्या हिजाेआज बढिरहेकाे छ। वास्तवमा स्वस्थ शरीरकाे अनिवार्य शर्त हाे हिँडाइ। यसलाइ हामीले गर्ने व्यायाममध्येको सबैभन्दा सरल र उपयोगी समेत मानिन्छ।
हिँडाइले शरीरलाई सही आकारमा ल्याउन मद्दत गर्छ। तौल व्यवस्थापन गर्न, रक्तचाप नियन्त्रण गर्न, शरीरमा झड्का, स्तन क्यान्सर र मधुमेयको खतरा कम गर्न हिँडाइ आवश्यक छ।
दिनहुँको हिँडाइले आयु बढाउँछ, अवसादको खतरा कम गर्छ र असल काम र कुरा प्रति हाम्रो मस्तिष्कको ध्यान बढाँउछ। एक मेडिकल सेन्टरका अनुसार हिँडाइले शरीरमा भएको खराब कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम गराइ राम्रो कोलेस्ट्रोलको मात्रामा वृद्धि गराउँछ।
हिँड्दा, मर्निङ वाक गर्दा मानसिक रुपमा समेत शरीरलाइ‌ ताजा राख्छ।
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणअनुसार हिँडाइले हाम्रो सोचमा स्पष्टता ल्याई समस्या सुल्झाउन प्रेरित गरी मानसिक तनावमा पनि कमी ल्याउँछ। हिँडाइको क्रममा शान्त र आरामदायी हिँडाइको ताल कायम राख्नुभयो भने यो एक प्रकारको ध्यानको रुप पनि हुनसक्छ।
सामाजिक सम्बन्धमा निकटता ल्याउँछ
कसैको साथमा दैनिक हिँड्नु हुन्छ भने व्यायामको साथसाथै मित्रतामा पनि गाढापना आउँछ। आफ्ना छिमेकका साथी र आफ्नो पतिपत्नी वा मन मिल्ने साथीसँग समय मिलाएर हिँड्ने गरेमा विना रोकावट केही विषयमा छलफल र मनका कुराहरु आदानप्रदान गर्न सहज हुन्छ।
आफ्नो वरिपरिको दुनियाँ देखाउँछ
हिँडाइले इन्द्रियहरुलाई उत्तेजित गर्छ र हाम्रो वरिपरिको नयाँ ठाउँ र त्यहाँको दुनियाँ उजागर गर्न सहयोग गर्छ। आफ्नो व्यस्त दैनिकीबाट थोरै समय निकालेर हिँड्ने र हिँड्ने क्रममा जान नपाइएका आफ्नै वरिपरिका नयाँ ठाउँहरु जाने हो भने व्यायाम र घुमघामसँगै हुन्छ। हिँड्नु भनेको नयाँ ठाउँ देखेर आश्चर्यचकित हुने निम्तो पाउनु हो।
हिँडाइलाई निरन्तरता दिन के गर्ने?
– हिँड्ने क्रममा सम्भव भएसम्म एउटा साथी सधैँ सँगै लैजाने, सम्भव भएन भने हप्ताको एक पटक समय मिलाएर साथीसँगै हिँड्न पनि सकिन्छ।
– घरमा कुकुर छ भने सँगै लैजाने गर्नुस्, कुकुरले हिँड्ने क्रममा निरन्तर साथ दिन्छ।
– हिँड्नको लागि आफ्नै वरिपरिको सुन्दर तर सुलभ ठाउँ छान्ने गर्नुहोस्।
– आफ्नो हिँडाइ मध्यमगतिका साथ सुरु गर्नुहोस् र विस्तारै गति र दूरीमा वृद्धि गर्नुस्।
– हिँड्ने ठाउँको छनोट गर्दा पहाडी क्षेत्र र सिँढी समावेश गर्नुहोस्।
– पानी पर्ने मौसममा छाता अनिवार्य साथ राख्नुहोस्। पानीमा रुझ्दा बिरामी पर्न सकिन्छ।
तौल घटाउने नाममा गरिने ७ गल्तीहरु
बिहान ५ मिनेट लामो श्वास लिने छाड्नेको फाईदा : जति लामो श्वास, त्यती धेरै साहस
वैज्ञानिकहरूले थ्रीडी प्रिन्टिङ प्रविधिको मद्दतबाट कोशिका र धमनी सहितको मुटु निर्माणमा सफलता